Xog Cusub Oo Kasoo Baxaysa Rabitaanka Man City Ee Lionel
By Apdihakem Omer Adam	 On Nov 23, 2020
Rabitaankii Lionel Messi ee ahayd inuu Barcelona iskaga tago suuqii xagaaga ayaa noqotay mid soo jiidatay dhammaan dareenka jamaahiirta kala duwan ee kubadda cagta iyadoo ay kooxda ugu cad cad inay heshaa ay ahayd Manchester City.
Ugu dambayn Messi ayaa go’aansaday inuusan ka tegin Camp Nou isaga oo sababta ku sifeeyay inuusan doonayn inay maxkamad isla tagaan kooxda uu ku sheegay mida uu jecel yahay.
Iyadoo heshiiska Messi uu yahay mid dhacaya dhammaadka xilli ciyaareedkan sidoo kalena uu sida cad ka cadhaysan yahay maamulka kooxda, inuu la midoobo Pep Guardiola oo tababarihiisii hore ah ayaa u muuqata wali mid macquul ah.
Haddaba, warka weyn ee haatan soo yeedhay ayaa ah mid ka yimid kanaalka Sky Sports ee ree England kaas oo sheegaya in Manchester City aysan gabi ahaanba u dhaqaaqi doonin Lionel Messi xagaaga sanadka dambe ee 2021 xataa haddii ay bilaash ku helayaan.
Sky ayaa sababta ay Sky Blues u diidi doonaan inay Messi lasoo saxeexdaan ku sheegay da’diisa oo weyn iyo waliba mushaharka uu qaato oo ah mid aad u badan.
Messi ayaa sanadka dambe 34 sano jirsan doona, marka laga yimaado inuusan ciyaar ahaan isbedelin oo awoodiisu halkii tahay haddana City ayaa mushaharkiisa u aragta mid badan.
Sida iska cad saxeexa Lionel ayaa ah mid dunidoo dhan ay kooxo dhawr ah oo tirsani awoodaan waxaana kamid ah Manchester City balse waxa adkaan doonta in lagu dhaco.
Mushaharka Leo ayaan ahayn sida xiddigaha kale ee kooxdiisa maadaama oo ay ku lamaan yihiin lacago kale oo badan oo ay kamid yihiin gunnooyin aad u badan oo la siiyo marka uu heshiis saxeexo.
Weerar lagu qaaday Masjid oo lagu dilay 5 qof, lagu
Ex-president claims Somalis search justice in Al-Shabaab